Nezvedu Us-Phu Ly Bao Co Ltd
WELCOME KUKURA NEDU
Makore gumi nemashanu Zvinoitika mune Zvemari Kugadzira
Kugadzira mukwende kubvira 2004, kutumirwa kune dzimwe nyika dzinokwana makumi matatu + kusanganisira US, Europe, Southeast Asia, Middle East etc. Iva neyako timu yeR & D muVietnam, QC timu uye yakasimba kudzora mhando. ISO30, SGS, CE vanopupurirwa.
Zvichienderana nerudzi rwezvinhu, tinogadzira ABS / PP / PC / Aluminium alloy / Oxford machira.
Zvikwereti zvedu zvemakesi zvakanakira ndezve mvura, kupisa kwakanyanya kupisa, eco-hushamwari, kusimba, kuremerwa etc. Zvakashandiswa zvakanyanya mukufamba, kushandisa kwezuva nezuva, kusimudzira, bhizinesi rwendo etc. Zvakanyanya kukosha, isu tine fekitori yeVietnam uye ivo mutengo wefekitori.
Vashandi, nzvimbo uye kugona
Kwemakore mashoma apfuura ekugadzirwa uye manejimendi uye kutsvagiridza, PLB yakamisa yayo yega yemhando management system. Passed the ISO9001: 2000 kunaka system chitupa uye ISO14000 environmental management certification system. PLB implement the concept of customer value creation to meet the specific needs of different customers, and continuously provide customers with solutions for technical problems.
Iyo fekitori ine inotsvedza mashini / blister muchina / punching michina / kusona michina / michina yekucheka.
Isu tinoshumira vanopfuura makumi matatu vatengi vepasi rese pasi rese. Nekugadzira kwedu uye nebasa rekugona takachengeta kwenguva refu kushandira pamwe nevatengi vedu vatengi.
Yedu yakakura Yemhando Kudzora timu tarisa zvigadzirwa isati yatumirwa, izvo zvinosanganisira Kutarisa humidity mukati pezvigadzirwa, kuremara, misprints, kutakura, etc. Chitupa: ISO, SGS, CE, RTS, ect.
Phu Ly Bao Kugadzirwa
Vanhu vakatungamira, vakatendeseka uye vakasimba, vatsva uye vanoshamisa, vadzoreredze nzanga.
Kugutsikana kwevatengi kutanga
Iva mukwikwidzi akanaka uye akasimba
Sevhisi yekumberi ； Kutsvaga kwekunaka;
Kunyatsotenda muhukama hwese.